Rasaasa News – Laba Wiil oo Reer Ogaadeeniya oo South Afrika Lagu Dilay
Laba Wiil oo Reer Ogaadeeniya oo South Afrika Lagu Dilay
on May 2, 2014 11:28 am
Habeenimadii Taariikhdu tahay 01/05/2014 waxaa lagu dilay wadanka koonfur afrika laba muwaadin oo u dhalatay wadanka Ogaadeeniya muwaadiniinta sida xaqdarada ah loo dilay waxaa lagu magacaabi jiray; Cabdirisaaq Cabdulaahi Xasan iyo Shaafi Mustafe Cabdi Raage.
Labadan wiil waxay ahaayeen dhalinyaro da,doodu u dhaxayso 25-30, wiilashan waxaa lagu dilay tuulada lagu magacaabo Matola oo 15 KM dhinaca Galbeedka kaga beegan magaalada Johannesburg,
sida uu noo sheegay Ibarahim Qorane oo goobjoge ahaa.
Ibraahin wuxuu yidhi “waxaan ahayn 4 nin, xiligii salada Makhrib, aalaaba xiliga dukaanku ugu dadka badan yahay,” Ibraahin wuxuu yidhi ” waxaan ahaa ruuxii ugu danbeeyay ee salaada soo tukada, markii aan soo baxayna waxaan maqalay foodhi ka yeedhaysa banaanka, waxaana u malaynay dad doonaya in ay na rabshaan.” Wiil Cumar la dhaho ayaa banaanka u baxay wuxuuna qaatay dhagax isla markiiba waxaa ku soo baxay 6 nin oo hubaysan cumar wuxuu u cararay banaanka.
waxaana nagu bilaabatay xabadii,
Tacshiirad baan nagu bilaabatay, Aniga [Ibrahim] oo dukaanka dhextaagnaa, waxaan fursad u helay in dadkii wax gadanayay dhexdooda aan seexdo markii amar nalagu siiyay in aan dhulka seexano, balse Shaafi oo iga badalay maqalka ayay xabadii ku dhacday, halka Cabdirisaaq uu isna banaanka ugu cararay. Waxaana ka daba tagay budhcadii oo dhabarka ka toogtay, ka dibna xabad la kor tagay oo dhaawac tiray.
Intaas kadib, waxay qaateen lacagtii iyo Airtime kii yaalay meesha maqalka wayna baxeen markii aan soo baxay ayay dadkii banaanka joogay ii sheegeen in walaaladay banaanka yaalaan waxaana ogaaday in Shaafina uu naftii banaanka ula baxay isaga oo ku nafwaayay meel aan dheerayn.
Cabdulaahi Muxumed oo ahaa ruuxii ugu horeeyay ee soo gaadha goobta ayaa intaas ku daray in nimanku ay ahaayeen lix nin ayna wateen laba baabuur wiilashana ay si cadawtinimo leh u laayeen. Saas waxaa u sheegay dad wadani ah oo arkayay marka uu falku dhacayay.
Dhacdadan tiiraanyada leh ayaa dhacaday abaarihii 07: fiidnimo. waxaa isugu yimid goobta dad aad u badan oo Soomaali ah.
Gudoomiyaha Jaalaiyada Ogaadeeniya Ee Koonfur Afrika Mudane Maxamed Daahir oo isagu soo gaadhay goobta wax yar kadib, ayaa ku tilmaamay dhacdadan mid bini aadamnimada ka baxsan wax lagu macneeyana aan lagaranaynin isla markaana yidhi waa dhacdo murugo leh waligeedna aan la hilmaamaynin waxayna la mid tahay tii sanadkii hore ka dhacday duleedka magaalada Johannesburg.
Waxaa goobta soo gaadhay Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee wadanka Koonfur Afrika Mudane Maxamed Cali Mire, isaga oo goobta kula hadlay dadka una sheegay in ay tahay wax laga xumaado isla markaana ayna safaaradu ka hadhi doonin danbiilayaasha gaystay dilkan foosha xun isagoo yidhi dadka soomaaliyeed ee xad gudubka loogu gaysto wadankan waa mid aynu ka xisaabtami doono.
Qunsulku wuxuu sheegay in sargaal ka tirsan Police ka deegaanka in uu sheegay in ay hayaan xog isla markaana ay rajo wayn ka qabaan in ay danbiilayaashan gacanta ku dhigaan
waxaa sidoo kale goobta joogtay saaxafada Soomaaliya oo isugu jirta TV iyo warbaahin kalle.
Faalo: Intii aan goobta kusugnayn oo dhanayd shan saacadood aya naloo sheegayay in meel aan naga dheerayn lagu laayay dad wadani ah oo 6 ruux ah waxaana geeridiisa naloosheegay mid halka ay shanta kale dhaawac yihiin sida ay Policeku noo sheegeen fal budhcadnimo ayaa ka dhacay meel aan inaga dheerayn. waxaa arkay dad wadani ah oo police ka ka codsanaya in ay caawiyaan waxaan aad ula yaabay maydka marxuumiinta oo mudadaas yaalay banaanka intaasna lasugayay gaadhigii lagu qaadi lahaa. iyo weeraro lagu rasaasaynayo dadka isla markaana lagu dhacayo oo ka dhacay meel aan naga dheerayn ayadoo wadanka koonfur afrika yahay wadan aad uga hor marsan xaga jidadka suura galna ay tahay in shantii daqiiqaba aad aragto gaadhi police. isbadalka iyo dilka fudud ee kasoo kordhaya wadanka koonfur afrika ayaa qayb ka ah waxyaabo badan oo lagu tilmaamo in uu sii dabcayo. dhanka siyaasada wadanka. dad badan waxay ku lasoonyihiin dhacdooyinka noocan ah in 75% Polie ku lug leeyihiin waxayna xog xogaal u yihiin police in kiisaska soomaalidu ay yihiin kuwo aan la isku xisaabinin
Aaska Labadan Marxuum ayaa dhici doona Bari salaada Jumce kadib, waxaana Janaasada lagu tukan doonaa Masaajidka Mayfair isagoo aaskuna uu ka dhici doono meeshii hore loogu aasi jiray Soomaalida ee ahayd qubuuraha Muslimiinta hadaan isbadal imaanin.
Rasaasa Waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa ummada Somalida Ogadeeniya, gaar ahaan qoyskii ay ka dhinteen labada marxuun. Eebow Janadii geel marxuumiinta xaqdarada ku dhintay. Aamiin Aamiin.